Ferdinand oo mar kale ka codsaday Harry Kane inuu ka tago Tottenham, si uu ugu biiro… – Gool FM
Ferdinand oo mar kale ka codsaday Harry Kane inuu ka tago Tottenham, si uu ugu biiro…
(London) 02 Okt 2019. Halyeeyga kooxda Manchester United iyo xulka qaranka England ee Rio Ferdinand ayaa markale kula taliyay weeraryahnaka ay isku wadanka yihiin ee Harry Kane inuu ka tago naadiga Tottenham Hotspur, hadii uu doonayo inuu ku guuleysto tartamada waa weyn.
Harry Kane ayaa galay xilli ciyaareedkiisii lixaad ee kooxda Tottenham Hotspur, laakiin wali wuxuu sugayaa in markii ugu horeysay uu kula guuleysto tartan weyn, inkastoo uu ka qeyb galay tartamo kala duwan ee gudaha ah iyo finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore.
Tottenham ayaa gaartay finalka Carabao Cup sannadkii 2015, waxaana ay ku dhameysteen kaalinta labaad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii 2016-2017, iyagoo sidoo kale guuldaro 2-0 ah kala kulamay kooxda Liverpool finalka Champions League xilli ciyaareedkii hore 2018/2019.
Intaa waxaa sii dheer, kooxda uu hogaamiyo Mauricio Pochettino ayaa laga reebay tartanka Carabao Cup isbuucii hore, halka 10 dhibcood ay ka dambeeyaan hogaamiyaasha ilaa iyo haatan horyaalka ee Liverpool.
Kaddib guuldaradii 7-2 aheyd ee ka soo gaartay Bayern Munich kulankii xalay ee tartanka Champions League, Rio Ferdinand ayaa muujiyay sida ay muhiim u tahay in Harry Kane uu ku biiro koox weyn si uu ugu guuleysto tartamada waa weyn.
Haddaba Rio Ferdinand ayaa u sheegay shabakada “British Telecom” ee dalka England:
“Marka aad fiiriso Harry Kane iyo waxa uu soo bandhigo kulan kasta uu ciyaarayo, waxaan la yaabanahay haddii uu doonayo inuu noqdo xiddiga koowaad ee kooxdiisa kulan kasta, ama inuu ku guuleysto koobab”.
Intaas kaddib Rio Ferdinand ayaa la weydiiyay su’aal ah bal haddii ay Tottenham Hotspur awood u leedahay inay ku guuleysato koobab wuxuuna ku jawaabay:
“Uma maleynayo sidaas, mana u maleynayo inay ahaayeen koox fiican, marka loo fiiriyo wixii dhacay labo sano kahor”.
“Go’aan dhakhso ah ayaan gaaray si aan u aado koox kale oo aan ugu guuleysto koobab, waxaa laga yaabaa in Harry uu sidaas oo kale ku fikirayo, waa 26 jir wuxuuna heystaa fursad yar oo kaliya, sidaas darteed waa inuu ka faa’ideystaa”.